tambajotra sosialy ho an'ny Fiarahana
tambajotra sosialy ho an’ny Fiarahana
Oroka tia lehilahy sy ny vehivavy rehetra, fa ny farany dia miezaka ny hanafina izany mba manana sasany tombony ny solontenan’ny fananahana matanjaka kokoa.»Ny tambajotra sosialy nandritra ny fihaonana»no manome fahafahana mba tonga saina mora sy mahafinaritra ny fifandraisana, manomboka amin’ny tsy manan-tsiny oroka! Mba ho azo antoka ny asa fanompoana»amin’ny tambajotra Sosialy ho an’ny Fiarahana»ho an’ny Fiarahana manolotra ny mety ny fananana sy ny fandrosoan’ny teknolojia, anisan’izany ny virtoaly lahatsary chats amin’ny tena-ny fotoana. Manomboka amin’ny tsara oroka sy winks, dia azo atao amin’ny fotoana iray mba hanangana ny fivoriana izay hitondra antsika amin’ny tena hihaona sy hanohy ny fifandraisana. Noho izany dia ilaina ny manana fifandraisana ao amin’ny Aterineto, ka tamin’ny alalan’ny fanampiana avy mba ho tonga iray ifanarahana mahasoa sy ny mahafinaritra ny toe-javatra. Hamaky bebe kokoa momba ny fanorohana ny»tambajotra Sosialy noho ny Fiarahana».
Manomboka ny hampivelatra ny fifandraisana amin’ny Aterineto tambajotra, izany hoe amin’ny Mampiaraka toerana. Toerana toy izany ho toy ny»ny tambajotra Sosialy ho an’ny Fiarahana»dia hanampy mba Haneho ny fihetseham-po noho ny fanampian’ny ankehitriny web teknolojia. Hanana asa vaovao, ary dia ho lasa matanjaka kokoa noho ny tsy fivadihana ny mpiara-miombon’antoka toy ny tenantsika, sy ny tambajotra sosialy»ny tambajotra Sosialy ho an’ny Fiarahana». Rehefa nandeha ny fotoana, ilaina ho an’ny fifandraisana, virtoaly oroka, sy ny hafa caresses miditra ho fahazarana tsara, fampandrosoana an-iray karazana fomban-drazana. Izany anefa tsy manakana ny hahazoana namana vaovao, mba hisarihana bebe kokoa ny namany sy ny mpiara-miasa, izany hoe hitarika feno virtoaly ny fiainana ao an-tambajotra. Hamaky bebe kokoa momba ny fampandrosoana ny fifandraisana amin’ny»tambajotra Sosialy noho ny Fiarahana».
Ny Daisy nizara ny oroka mamy noho ny mahatsapa
Maro amintsika any amin ny fahazazana sy ny fahatanorana nilalao tao amin’ny lalao malaza amin’ny fifanorohana, azo antoka fa miaraka amin’ny maro samihafa mahafinaritra fotoana. Nefa dia azo atao ny mandamina toy ny olon-dehibe lalao ao amin’ny tontolo virtoaly, feno ireo karazana fialam-boly, ankoatra ny Mampiaraka toerana? Angamba izany no iray amin’ireo antony mahatonga ny mpamorona ny fanompoana ara-tsosialy»ny tambajotra Sosialy ho an’ny fivoriana»hanao zavatra dia fahafahana ho an’ny multilateral ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ny olon-tsy fantatra. Mahagaga ny fahalalana misokatra rehefa nijery ireo tanora ary tsy izany ihany mpiara-miasa, rehefa avy rehetra, fitia dia afaka mitarika ho amin’ny fifanorohana, ary hanaraka azy, mba tena efa akaiky.
Afa-tsy ny Fiarahana amin’ny aterineto dia natao, indrindra mba hamorona ny mpivady feno ao anatin’ny famatorana ny fanambadiana sy ny ivelan’ny sisintaniny
Hamaky bebe kokoa momba ny mamy»tambajotra Sosialy ho an’ny Fiarahana»nanoroka
Ho an’ny»tambajotra Sosialy ho an’ny Fiarahana»mandehana be dia be ny eritreritra tsy mba mieritreritra
Amin’ny sehatra rehetra ao amin’ny ara-tsosialy Mampiaraka ny fitsapana ny fotoana mety ho fohy, ny famenoana sy ny fandefasana ny fangatahana afa-tsy amin’ny ny fototry ny angon-drakitra manokana. Registrirati amin’ny»tambajotra Sosialy ho an’ny Fiarahana», dia afaka hisorohana ny tsy mahafinaritra endri-javatra, izay raiki-tampisaka ao amin’ny tantaram-pitiavana fifandraisana, ka tsy afaka mieritreritra mikasika ny lahatra. Ara-teknika ny»tambajotra Sosialy ho an’ny Fiarahana»-ny Fiarahana rehetra fotsiny get nikarakara sy ny mety ho misy mpampiasa, na dia tsy tena savvy ao amin’ny tontolo virtoaly ny Aterineto. Amin’izao fotoana izao, dia toa azo heverina fa tsy ampy ny milaza ny momba ny tiany ho miaraka amin’ny mpiara-miasa ny mifanohitra izy hanome fahafaham-po ny filàna rehetra.
Hamaky bebe kokoa momba ny fitiavana loza hanjo ao amin’ny»ny tambajotra Sosialy ho an’ny mpanao dia lavitra»
Ahoana no hihaona ny olona? - Cosmopolitan →